Apple က iPhone ကို 6S နှင့် 6S Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Roundup - သတင်း Rule
Apple က iPhone ကို 6S နှင့် 6S Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Roundup
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple က iPhone ကို 6S နှင့် 6S Plus အားပြန်လည်သုံးသပ် roundup: ခွန်အားကြီး, မြန်မြန်, လေးလံ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 22 ရက်စက်တင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 14.49 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Apple ရဲ့ iPhone အသစ် 6S နှင့် 6S Plus အားသောကြာနေ့တွင်ဖောက်သည်လက်၌မြေယာ smartphones, ဒါပေမဲ့သုံးသပ်ရေးတစ်ဦးကို select လုပ်ပါစည်းအစောပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားခဲ့ကြ.
The Guardian ကအိုင်ဖုန်း 6S နှင့် 6S တစ်နမူနာလက်ခံရရှိရန် Apple ကကောက်ယူသောသူတို့သည်တယောက် Plus အားရှေ့၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်မဟုတ်, နှင့်စားသုံးသူများအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာတဦးတည်းဝယ်ယူပြီးနောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ထုတ်ဝေရန်လိမ့်မည်.
အချိန်အတောအတွင်း, ဒီနေရာမှာ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်အပေါ်ယေဘုယျအမြင်တစ်ဦးအမြန် roundup ဖြစ်ပါသည်.
ဆန်းစစ်ခြင်း: Apple ရဲ့ iPhone ကို 6s ထိုအ 6s Plus အား Go ကို '' ကို tick '' – Tech မှအကြပ်အတည်း
မဿဲ Panzarino အတော်လေးတစ်ဦး uptick ရှုမြင် အိုင်ဖုန်းကျော်ယခုနှစ်ရဲ့ iPhone ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် 6, သူ့ရဲ့အတွက် "ကို tick-Tock" အဆင့်မြှင့်သံသရာ:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုများတွင်, တစ်ဦးရှိ၏ 56.5% အိုင်ဖုန်းကနေ Geekbench တွက်ရင်ရမှတ်များတိုး6Plus အားအိုင်ဖုန်း 6s Plus အားရန်. ဒါကအောက်ပါအတိုင်း 97% အိုင်ဖုန်းကနေတိုး5အိုင်ဖုန်း 5s မှ.
နှိုင်းယှဉ်လျှင်, တစ်ခုသာရှိ၏ 24.9% အိုင်ဖုန်းမှအိုင်ဖုန်း 5s ကနေတိုး 6.
စွမ်းဆောင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကို 'Tock' 'အနှစ်တကယ်တင်းပါးထဲမှာ' 'ကို tick' 'အနှစ်ကန်နေကြတယ်.
iPhone ကို 6S ပြန်လည်သုံးသပ်: Apple ရဲ့ 3D Touch ကို screen နဲ့ကင်မရာကိုတိုးတက်မှုပိုကောင်းတာအကောင်းဆုံးပါစေ – ဒစ်ဂျစ်တယ်သူလျှို
အိုင်ဖုန်း 6S ၎င်း၏နောင်တော်ထက်ပိုထူပြီးပိုလေးဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, Matt ဟေးလ်ကသိသာမဟုတ်ခဲ့တွေ့ရှိရ.
ငြင်းခုံပြစ်တင်ခြင်းကိုမလိုအပ်, ဒီဆိုစံအားဖြင့်ဆဲပါးလွှာသည်, ဖုန်းရဲ့တိုးပွားလာ portliness အနိုင်နိုင်သိသာနှင့်ဆက်ပြောသည် 14g ဖုန်းကိုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချ heft ပေးခြင်းနှင့်အတူ. စျေးကွက်အပေါ်အလွယ်တကူအများဆုံးကောင်းစွာတည်ဆောက်ဟန်းဆက် – Samsung က Galaxy S6 နဲ့ HTC One M9 ၏အကြိုက်မှတိုးမြှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ – အိုင်ဖုန်း 6S ရဲ့အေးမြ-to-The-touch နဲ့သတ္တုကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ညင်သာစွာကွေးအနားကဖုန်းကိုကြည့်ပါစေနှင့်ကြီးစွာသောခံစားရ.
iPhone ကို 6S ပြန်လည်သုံးသပ်: Apple ကရှေ့ကိုတိုက်တွန်း – the Verge
Nilay Patel က သစ်ဖိအား-ထိခိုက်မခံတဲ့ "3D Touch ကို" screen ကိုချစ်သောသူ ဒါပေမယ့်အတိအကျဝတ္ထုအယူအဆမဟုတ်ပါဘူးကွောငျးဝနျခံ, ဒါကြောင့်အသစ်တခုအကောင်အထည်ဖော်မှုရဲ့ပင်လျှင်:
အိမ်တွင်မျက်နှာပြင်တွင်, သငျသညျသူတို့ကိုတွန်းအားပေးသောအခါ app ကို icon တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုဖျောပွနိုငျ. ပြက္ခဒိန် entry ပေါ်မှာတွန်းအားပေးသငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုသောအချက်အလက်များပြသထားတယ်, နှင့်မြေပုံ pin ကိုအပေါ်တွန်းအားပေးသငျသညျလမျးညှနျမှဖြောင့်ခုန်ပေးနိုင်ပါတယ်. မေးလ်ထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုအပေါ်တွန်းအားပေးတဲ့သင်ဖျက်ပစ်ရန်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှချော်မလဲနိုငျသော preview ကိုသို့မဟုတ် archive ကိုဖွင့်လှစ်, နှင့်ခက်ခဲတွန်းအားပေးသတင်းစကားဖွင့်လှစ်. ဒါဟာ Safari က၌တူညီသောင်: link တစ်ခုအပေါ်ပေါ့ပေါ့တွန်းအားပေးတဲ့ preview ကိုဖွင့်လှစ်, အမှန်တကယ်အနည်းငယ်ခက်ခဲတွန်းအားပေးစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်.
ဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုရူးမိုးကြိုးမဟုတ်ပါဘူး; Google ကတစ်စုံတစ်ဦးကိုနာမတျောကို '' က Windows Phone အတည်ပြုဖို့လုံလောက်တဲ့အရက်မူးခဲ့ကတည်းကအားလုံးမျက်နှာပြင်ကျော်အမှုအရာလျှောခဲ့ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့် Microsoft နှင့်အတူအလွန်ဆင်တူတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်7စီးရီး'. ဒါပေမယ့် 3D Touch ကို [ဖြစ်] မည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်ကိုယူထားပြီးဒီဦးတည်ဝေးအားဖြင့်အများဆုံးရန်လိုခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာခြေလှမ်း.
iPhone ကို 6s ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: တစ်ဦးအနည်းငယ် သာ. ကောင်း၏ iPhone ကို6– The Wall Street Journal
အဆိုပါကင်မရာရဲ့ပိုကောင်းတဲ့, Processor ​​ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းနှင့်ထိုသို့ screen သစ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ အိုင်ဖုန်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်းနေဆဲဆင်းရဲ, ဂျို Stern ပာသည်နှင့်အညီ:
၏ပထမဦးဆုံးလမ်းထွက်ဒီရကွပါစို့. အဆိုပါအဘယ်သူမျှမ. 1 လူတစ်ဦးစမတ်ဖုန်းအတွက်ချင်တယ်အရာပိုကောင်းဘက်ထရီသက်တမ်းသည်. ထိုအခါက iPhone 6s ကမကယ်မနှုတ်ပါဘူး.
အဆိုပါ 4.7 လက်မအရွယ် 6s သောနေ့ရက်ကာလကိုတစျဆငျ့သငျသညျရလိမ့်မည်, သင်မူကား, လေးလံသောအသုံးပြုမှုမှအလယ်အလတ်နှင့်အတူအိပ်ရာဝင်ချိန်သေးပါဘူးကြောင့်စေရန်ရုန်းကန်လိမ့်မယ်. ထိုသို့ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်, ငါ့ထက်စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပုံ6ငါတိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများကဲ့သို့အသစ် processor ​​ကို-intensive ကင်မရာကအင်္ဂါရပ်တွေကိုအသုံးပြုသည့်အခါ. အဆိုပါပိုကြီး 5.5 လက်မအရွယ် 6s Plus အားကြာကြာကြာမြင့်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးလေးလံအသုံးပြုသူအနေနှင့်နေ့ရက်ကိုရဲ့အဆုံးမှာကျော်ကျန်ရစ်အချို့သောဖျော်ရည်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
ငါ The New iPhone ကို 6S ထဲကကမကောင်းဘူးအသုံးပြုပြီးတော့ဒါကဖြစ်သွားဆိုတာဘာလဲ – BuzzFeed ဘဝ
BuzzFeed ဘဝအတှကျရေးသားခြင်း (မ BuzzFeed သတင်းများ, ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောင်) နီကိုးလ်ငုယင် Apple ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုတွေ့ အနည်းငယ်မကြိုက်ဘူး:
အ 6S များအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆောင်ပုဒ်ကိုပြောင်းလဲရဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာအရာအားလုံးသည် "ဖြစ်ပါတယ်,ကန့်နေသောကြောင့် "သောရယ်စရာဖြစ်ပါသည်, ကောင်းစွာ, မမှန်ပါဘူး. ဟာ့ဒ်ဝဲမှာကြည့်လိုက်ပါ. ဒါဟာ 6S အကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြရန်မဖြစ်နိုင်ရဲ့6အိုင်ဖုန်း, တစ်ဦး tinyyy အဘို့ကယ်တင်ပါ [ရှိနေပြီ] အနောက်ဘက်နှင့်အနည်းငယ်ပိုပြီး heft အပေါ်ပုရွက်ဆိတ်-size "S" ကို (အ 6S ဖုန်းများတစ်အောင်စလေးတွေဟာ). သူတို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်တူညီအမွှာတူကြောင်းခွာအမွှာင်.
အဘယျသို့ကွဲပြားခြားနားသည်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်, သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုပြည်တွင်းရေး, အရာတစျခုငါကလူသွေးဆောင်မည်ထင်အဘယ်သို့သောအ (အမည်ရ, ငါ့ကို) အဆင့်မြှင့်တင်ရန်. 3: D Touch ကိုအ 6S ရဲ့လူသတ်သမား feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်ထိုသို့ apps များကကူညီပံ့ပိုးရန်ဆုံးဖြတ်ရာပေါ်မူတည်.
သို့သျောလညျးကိုနောက်ထပ် iPhone ကို 6s ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – BuzzFeed သတင်းများ
ယောဟနျသ Paczkowski 12-megapixel ကင်မရာအားဖြင့်ပစ်ခတ်ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့ ကင်မရာကိုယေဘုယျအားဖြင့် သာ. ကောင်း၏, သငျသညျမြျှောလငျ့မယ်လို့အဖြစ်.
ငါအသစ်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဓါတ်ပုံများ 12 အိုင်ဖုန်း 6s အပေါ်-megapixel နောက်ဘက်ကင်မရာကိုငါနှင့်အတူယူဖူးတဲ့သူမြားကိုထက်နည်းနည်းပိုကြည့်ကောင်း 8 အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်-megapixel တယောက်6- နှင့်ပင်ငါ့အမမှာ-All-a-ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့မျက်စိကမြင်နိုင်ပါသည်.
Apple ကဒီအကြောင်းကြောင့် "တိုးတက်ဒေသခံသေံမြေပုံ" နှင့်အာရုံစိုက် Pixels လို့ခေါ်တဲ့ "အဆင့်မြင့်နိုင်ပြီး pixel နည်းပညာကို" ၏ကပြောပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်နိုင်သည်. ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး. အဘယျသို့အရေးပါငါ့သမီး၏ဓာတ်ပုံများကိုပူနွေးကြည့်ရှုကြောင်း, ပြတ်သား, အသေးစိတ်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. သူတို့ကိုငါတက်မှုတ်သည့်အခါထိုသူတို့ကအညီအမျှကြည့်ကောင်းရှုကောင်း.
iPhone ကို 6S Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်: ပိုကောင်းပိုကြီး Is? – အိတ်ကပ်-Plus ကို
စတူးဝပ်မိုင်အ optical stabilization နဲ့အဆင့်ထောက်လှမ်း autofocus ကို iPhone ရဲ့ကင်မရာဟာဆုရှင်မှအသစ် 12-megapixel ကင်မရာအဆင့်မြှင့်လုပ်ကပြောပါတယ်, ဒါပေမဲ့ တိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများယခုများအတွက်ရောထွေးအိတ်များမှာ.
ကျွန်တော်တို့ပစ်ခတ်င်တိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများတစ်တွေအများကြီးကအလျင်အမြန်ရိုက်ကူးယူပြီးပြီးနောက်ကင်မရာကျဆင်းနေကိုရိုက်ကူးပြီ. နောက်ထပ်စိတ်ပျက်အသံအလိုအလြောကျမှတျတမျးတငျထားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ကြိမ်မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့သော – ဥပမာကလေးတစ်ဦးရဲ့တဟီဟီရယ် – ဒါပေမဲ့မဤမျှလောက်ကြီးစွာသောသင်နောက်ခံအော်ဟစ်တူကလေးရရှိပါသည်အခါ,.
အပိုဗီဒီယိုလည်းသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကထပ်ပြောသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်, တစ်တိုက်ရိုက်ဓာတ်ပုံအဓိပ္ပာယ်အာကာသ၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစျနေဆဲဓါတ်ပုံလှည့်ပတ်ရကျိုးနပ်သည်. သငျသညျက Apple ရဲ့ iCloud Drive ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုအချို့ကိုဖြုတ်ပစ်နိုင်သည်နေစဉ် (တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းမှာ) တစ်ဦး 16GB iPhone ကို 6S Plus အားအဖြစ်ဝေးကဖို့အသုံးပြုအဖြစ်ဆန့်သွားသည်မဟုတ် (တစ်ဦး 32GB နိမ့်ဆုံးမော်ဒယ်များအတွက်အငြင်းအခုံဆိုင်တွေမှာ).
iPhone ကို 6S ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: သစ်အင်္ဂါရပ်များအဘို့လာကြ, အအော်ဟစ်မြန်နှုန်းအဘို့အနေဖို့ – ဘလွန်းဘာ့ဂ်
speed ဖြစ်ပါသည် ဆမ် Grobart များအတွက် iPhone သစ်၏စိတ်နှလုံးမှာ, သစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လက်ဗွေစကင်နာများအပါအဝင်:
အဆိုပါ Touch ID sensor ကိုချက်ချင်းဖြစ်ပါသည်: သင်ဖုန်းကိုနိုးဖို့ home ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖူးတဲ့အချိန်အားဖြင့်, သငျသညျပြီးသားအိမ် screen ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်မှန်ကြောင်းနှင့်များမှာင်.
iPhone ကို 6s ပြန်လည်သုံးသပ်: အောင်မြင်မှုရဲ့အဘို့တည် – the Telegraph မှ
Rhiannon Williams ဟာအလိုအရ, အစဉ်အမြဲ-ကိုနားထောငျ "ဟေ့ Siri" အင်္ဂါရပ် သငျသညျလူတိုငျးကိုလစျြလြူရှုဖို့အလုပ်သင်ယူမှုတစ်နည်းနည်းလိုအပ်ပါတယ်ပေမယ်:
အဘက်ပေါင်းစုံ A9 မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, Siri ကိုအမြဲအပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ်, ထို command ကို "ဟေ့ Siri" က activated ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ. သငျသညျပထမဦးဆုံး iPhone ကို activati​​on ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာဖွင့် Siri ကိုထားသောအခါ၎င်းသည်သင်၏စကားသံကို attuned ဖြစ်ပါတယ်, သော Siri ဟာလူစည်ကားတဲ​​့အခန်းအတွင်းကနေတယောက်တည်းသင်၏စကားသံထွက်ကောက်နိုင်မှထင်ဆိုလိုပါတယ်. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မှအလားတူအသက်အရွယ်နှင့်စကားသံကိုအကွာအဝေး၏အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦး command ကိုစကားပြောခြင်းဖြင့်အကွာအဝေးကနေ Siri ကိုသက်ဝင်နိုင်ခဲ့သည်ကွောငျးတှေ့ခဲ့, ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသန့်စင်တစ်နည်းနည်းလိုအပ်ပါတယ်သည့် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.
iPhone ကို 6s Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်: ပိုပြီးဘက်ထရီ, ဖုန်းအသစ်ကြီးမားသောဖုန်းများမှပတ်ပတ်လည်ကိုသင်အနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ပိုကောင်းကင်မရာနှင့်တစ်ဦးပိုမိုကြီးမားမျက်နှာပြင်ကိုဆိုလိုတာ – အဆိုပါလွတ်လပ်သော
ထိုနှင်းဆီရွှေအရောင်၏, ပုံကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခက်ပါတယ်နှင့် စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ပိုကောင်းကြည့်, ဒါဝိဒ်သည်ကိုတော့ပြောပါတယ်.
အဆိုပါနှင်းဆီကိုရွှေ, စကားမစပ်, ဓါတ်ပုံထဲမှာထက်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပိုကောင်းကြည့်, အစားအထဲကထွက်-and ပန်းရောင်ထက်နားလည်နှင့်နွေးထွေးသောသောအရောင်ကိုကျေးဇူးတင်.
iPhone ကို 6S ပြန်လည်သုံးသပ် – Tech မှ Radar
ပိုက်ဆံမရှိသောအရာဝတ္ထုလျှင်ဂါရတ် Beavis မ brainer အဖြစ်အဆင့်မြှင့်ရှုမြင်, ဒါပေမဲ့တကယ့် အများဆုံးလူတို့အဘို့အများကြီးပိုခက်ခဲခေါ်ဆိုခ.
ဒါဟာနေဆဲတယောက်င်, လျှင်မဟုတ်ဘဲ, စျေးကွက်အပေါ်စျေးအကြီးဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းများ, ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေအဖြစ်တိုင်းလမ်းအတွက်အထင်ကြီးဖို့, အတော်လေးသော iPhone ကို 6S မပြု. အဆိုပါ iPhone ကို6တစ်နိမ့်စျေးနှုန်းမှာရောင်းချနေဆဲ, ထိုသို့နှင့် Apple ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ဖုန်းကိုအကြားခြားနားချက်ကိုလျှစ်.
• iOS ကို9ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အဘို့အခုန်တစ်ခုအဆင့်မြှင့်, သို့မဟုတ် skip?
36016	0 ပန်းသီး, အပိုဒ်, iPhone ကို, iPhone ကို 6s, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ
← Amazon ကဂိမ်းနှင့် 4K TV က streaming Fire ကို update ကိုလွှတ်တင် နားထောငျဖို့ကိုဘယ်လို (နှင့်ဖျက်ခြင်း) သငျသညျအစဉျအမွဲကို Google မှပြောကြားခဲ့သည်င့်အရာအားလုံးကို →